DEG-DEG+DHAGEYSO: M/weyne Gaas oo ka hadlay Is Casilaadii Shariif Xasan, Si Kululna u Weeraray MD Farmaajo. – Puntlandtimes
DEG-DEG+DHAGEYSO: M/weyne Gaas oo ka hadlay Is Casilaadii Shariif Xasan, Si Kululna u Weeraray MD Farmaajo.
GAROOWE(P-TIMES)-Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Puntland Cabdiweli Cali Gaas, ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay in kaliya ay ahmiyad siiyaan shaqaalahooda joogo Magaalada caasimada ah iyo hareeraheeda.
Madaxweyne Gaas ayaa si kulul uga hadlay Is Casilaada Madaxweyne Shariif Xasan, waxaana uu si kulul u weeraray Madaxweyne Farmaajo.
HALKAAN RIIX SI AAD U DHAGEYSATO.
Waxa laysku maandhaafsanyahay waa xuduudaha u dhexeeya masuuladaha ay kala leeyihiin dowlada dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Aad iyo aad ayaan u boogaadinayaa dhowladaha xubnaha ka ah dowlada dhexe. Waayo waxay muujiyeen kala dambeyn iyo ixtiraam xad dhaaf ah oo ay u hayaan dhowlada dhexe. Ayadoo dowlada dhexe ay awoodeedu dhaafsanayn villa hamar iyo eerboorka muqdisho .
Taas waxaa “Dowlado Xubneedka” u dheer dhabar jabin iyo jilaafo iyo balan fur iyo caburin iyo xaqiraad iyo waxtar la’aan iyo faragelin iyo been ka sheeg xoogan oo uga imaanaya dhawlada dhexe.
Ayadoo xaaladu iyo xaqiiqada jidha saas u caqiran tahay ayey dawlad xubneedku muujiyeen tanasul iyo samir xad dhaaf ah . Oo asan la ficil qaadin falxumada ay dhowlada dhexe faraha kula jidho.
Talaabada kaliya oo ay dawlad xubneedku qaadeen waa tan ay xiriirka ka dhexeeya dawlada dhexe ku xanibeen. Taaso aan u arko tilaabo jilicsan oo aan tubta toosan ku toosinahayn dawlada dhexe.
Dawlada somaalia waxaa u dhisan dawlad federaal ah oo awoodaha dowlada dhexe iyo dawlado xubneedku lakala leeyahay oo dasturka si bayaan ah ugu qoran.
Khaas ahaan waxaa puntland u dheeri ah in ay tahay “AUTONOMOUS STATE” oo macnaheedu yahay Dowlad madax banaan oo dhowlad dhexe hoos joogta. Taaso puntland siinaysa awood ay calamka xiriir toos ah la yeelato haday noqoto awood dhaqaale iyo iskaashi soke.
Tusaale waxaa loo soo qaadan karaa jaziirada Zanzibar oo ah autonomous state oo hoos joogta dawlada Tanzaania. Zanzibar xiriir toos ah ayey la leedahay dunida oo wax muran ah kama keento dowlada dhexe ee Tanzania ee xarunteedu tahay Dar-e-Salaam.
Waxaa moodaa in puntland awoodeedii iyo xaquuqdii ay xaqa u lahayd gorgortan galisey oo ay noqotay libaax ida la koray oo la daaqay.
Hey Look what we affect conducive to you! an minatoryoffers